တရုတ်ပြည်ရဲ့ အရှည်ဆုံး မြစ်ဖြစ်တဲ့ ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်မှာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ မြစ်ရေ တိုက်စားတာကြောင့် ကမ်းပါး ပြိုတဲ့ဒဏ်ကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပြီး ခံလာရပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အကြီးဆုံး ရေလွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သြဂုတ် လဆန်း ကြေညာချက်အရ ဇူလိုင်တစ်လလုံး ရေကြီးခဲ့တာကြောင့် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် သေဆုံး စုစုပေါင်း ၇၆၄ ဦးခန့် ရှိခဲ့ပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသူပေါင်း ရှစ်သန်းကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စာရင်းထဲမှာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ အာမခံကြေး ပြန်ရစရာ ရှိပါတယ်။ အချိန်မီ သတင်း မပေးလို့ဆိုပြီး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဒေါသ ထွက်ခဲ့တာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာမြေပေါင်း ဧက ၁၈ သန်းလောက် ထိခိုက် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် တစ်နှစ်တည်းကို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ လူပေါင်း ၁၁ သန်းလောက်အထိ နစ်နာခဲ့ပါတယ်။
Sullivan, L.R., 2007. Historical dictionary of the People's Republic of China.Scarecrow Press.
National Geographic (2016). China's Three Gorges Dam, by the Numbers